I-LinuxCapable - Umthombo Wakho Onobungane we-GNU/Linux Howtos
I-Arch Linux Based
I-Linux Mint Debian Edition
Ungayifaka kanjani i-HPLIP ku-Ubuntu 22.04 LTS
Kushicilelwe: NgoLwesihlanu, Meyi 20, 2022
Iphrojekthi ye-HPLIP yethulwa ngabakwa-HP inc. ihlose ukwenza kube lula kubaphathi bezinhlelo nakubasebenzisi besistimu yokusebenza ye-Linux nge…
Uyifaka kanjani i-Plex Media Server ku-Arch Linux
I-Plex Media Server isofthiwe yokugcina konke okuqukethwe kwakho kwemidiya yedijithali futhi ifinyelele kukho ngohlelo lokusebenza lweklayenti olufana ne-TV yakho, i-NVIDIA Shield, ...
Uyifaka kanjani i-PostgreSQL ku-Ubuntu 22.04 LTS
I-PostgreSQL iwuhlelo oluzinze kakhulu noluthembekile lokuphathwa kwedatha esetshenziswe iminyaka engaphezu kwengama-20. Isekelwa umphakathi osebenzayo…
Indlela yokufaka i-MariaDB ku-Ubuntu 22.04 LTS
Kugcine ukubuyekezwa: NgoLwesihlanu, Meyi 20, 2022
I-MariaDB ingenye yemithombo yolwazi evulekile edume kakhulu eduze nomsunguli wayo i-MySQL. Abadali bokuqala be-MySQL bathuthukise i-MariaDB ekuphenduleni ukwesaba ukuthi i-MySQL izoba yisevisi ekhokhelwayo kungazelelwe ...
Uyifaka kanjani i-Visual Studio Code ku-LMDE 5 "Elsie"
I-Visual Studio Code ingumhleli wamahhala futhi onamandla wekhodi yomthombo owenziwe iMicrosoft yeWindows, Linux, kanye ne-macOS. I-VSCode inikeza izici eziningi ezifana nokusekelwa ...
Indlela yokufaka i-PowerShell ku-LMDE 5 “Elsie”
I-Microsoft PowerShell iwulimi lokubhala olushintshashintshashintshayo noluhamba phambili embonini olungase lusetshenziselwe ukuzishintshanisa. Ibuye ihlanganiswe nobunye ubuchwepheshe obufana ne-CI/CD…
Ungayifaka kanjani i-VSCodium ku-LMDE 5 “Elsie”
I-VSCodium iyimfoloko ye-Microsoft Visual Studio Code Editor elungisiwe ukuze ibe nokufinyelela okugcwele komthombo ovulekile. Ikhodi yomthombo yalo mkhiqizo ingatholakala ...
Ungasifaka kanjani isiphequluli se-Opera ku-LMDE 5 “Elsie”
I-Opera isiphequluli sewebhu samahhala, esinenkundla yesiphambano esakhiwe i-Opera Software futhi sisebenza njengesiphequluli esisekelwe ku-Chromium. I-Opera inikezela ngesiphequluli sewebhu esihlanzekile, sesimanje esi...
Uyifaka kanjani i-XanMod Kernel ku-Pop!_OS 22.04 LTS
I-XanMod iwumthombo ovulekile wenhloso evamile ye-Linux Kernel esikhundleni se-kernel yesitoko nge-Pop!_OS 22.04 LTS. Ifaka izilungiselelo ngokwezifiso nezici ezintsha futhi ...
Indlela yokufaka i-GIT ku-Fedora 36 Linux
I-GIT iwuhlelo lokulawula uhlobo lwamahhala nomthombo ovulekile olungaphatha kahle amaphrojekthi amancane noma amakhulu. Ivumela onjiniyela abaningi ukuthi basebenze ndawonye…
Ungayifaka kanjani i-Redis ku-Fedora 36 Linux
I-Redis iwumthombo ovulekile (unelayisensi ye-BSD), isitolo sedatha yedatha yokhiye wenkumbulo esetshenziswa njengendawo egciniwe, inqolobane, kanye nomdayiseli wemiyalezo. I-Redis isekela izakhiwo zedatha ezifana neyunithi yezinhlamvu, amahashi, izinhlu, amasethi, okuhleliwe ...
Ungayifaka kanjani i-Apache nge-ModSecurity ku-Ubuntu 22.04 LTS
I-ModSecurity, evame ukubizwa ngokuthi i-Modsec, iyi-firewall yesicelo sewebhu yamahhala (WAF). I-ModSecurity yakhiwe njengemojula Yeseva ye-Apache HTTP. Kodwa-ke, kusukela ezinsukwini zayo zokuqala, ...
ikhasi1 ikhasi2 ... ikhasi80 Olandelayo →
© 2021 - 2022 LinuxIsebenza kuwo wonke amalungelo agodliwe.
Wonke ama-logo, izimpawu zokuhweba nezimpawu zokuthengisa ezibhalisiwe ziyimpahla yabanikazi bazo.
Le webhusayithi ngeyezinjongo zemfundo kuphela. Asikho iwaranti noma isinxephezelo esinikezwayo nganoma yikuphi ukulahleka kwedatha noma ihadiwe.